Xakamaynta Cayayaanka | February 2020
Sidee uga takhalusi jirtada May
Iyada oo kuleylka, dhulka waxaa jira cayayaanka badan oo kala duwan. Badankooduna waxay keenaan faa'iidooyin muuqda: pollinate and cultivate dhirta. Laakiin qaar ka mid ah waxay waxyeello ka badan yihiin wanaag. Ka mid ah cayayaanka noocan oo kale ah meel gaar ah waxaa degan Khrushka. Si loo yareeyo dhibaatada ay sababto qashinkaas, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid tallaabooyinka ka hortagga ah ee wax ku oolka ah, iyo in lagu hagaajiyo habka wax looga qabanayo.
Bannaanka u badan dhirta ubaxyada dhirta. Jacaylka habka sahlan ee lagu demiyo iyo daryeelka fudud. Laakiin ha ilaawin sifooyinka waxyeellada ee midabada. Haddii aad fiiriso shuruudaha beerashada iyo daryeelka, ubadka lama kabayo cudurada ama cayayaanka. Noocyada ubaxyada ubax Lily - waa warshad dilka ah, laakiin si ay u sanad kasta Bloom, waa in aad dhab ahaantii soo celin saddex sano kasta.
Dhammaan dhirta dhirta ee hadda jira, kaadi heysta ayaa ugu yaraan dardar gelinaysa daryeelka, waxaana badanaa loo isticmaalaa daawo. Hoosta, waxaan si faahfaahsan u baran doonaa noocyada ugu caansan ee geedkan, qaabka dhalmada iyo sida loo daryeelo kaadiheysta kaadiheysta. La kulan Bubbleplod Bubbleplodnik waa geedo qurxoon, faa'iidada ugu weyn ee koritaanka degdegga ah, aan qabyo ahayn, iyo sidoo kale muuqaal muuqaal leh, oo sii socota inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Waa maxay rutabaga faa'iido leh
Swede waa warshad isku dhafan oo kaabajan iyo dabocase, Sweden waxaa loo tixgeliyaa inay tahay waddankeeda. Dalagga xididgan ayaa leh mid casiir leh oo jilicsan oo jilicsan, oo ah qaraabo dabocase, dabocad iyo nooc kasta oo kaabash ah. Xeerarka beeritaanka geela Waa maxay jeexjeexa, mar hore waa caddayn, aynu ogaanno qodobbada muhiimka ah ee beerto asalkan.
Rennbeckia Perennial waa geedka quruxda badan ee cadowga Astrov. Wuxuu ka yimid Waqooyiga Ameerika. Cunto noocan oo kale ah waxay noqon doontaa mid aad u fiican ee sariirta ubax kasta, iyo xitaa asal ah ee floriculture waxay u hogaansami kartaa xeerarka daryeelka. Ma taqaanaa? Rudbeckia ayaa magaceeda ku sharraxday botanistayaasha ka soo jeeda Iswiidhan, Olof Rudbek (oo helay nidaamka nidaamka lenfiga) iyo aabihiis.
Sprouts Brussels: beeritaanka, daryeelka, gargaarka
In this article, waxaan ku bari doonaa sida loo aaso sprouts Brussels si sax ah. Aan kuu sheegno waxa ciidda ay tahay iyo inta jeer ee aad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta. Ma waxaad baran doontaa wax cusub oo kaliya, laakiin sidoo kale waxaad baraneysaa waxyaabo kooban oo xiiso leh oo ku saabsan kaabash. Ma taqaanaa? Karl Linney markii ugu horreysay ayaa lagu caleemo saaray Kaabashka, isaga oo ugu yeeray Brussels ka dib markii bannaanbaxayaal Belgian ah oo ka yimid Brussels.
Cuntooyinka beerta waa beer khudradeed ah oo qaabeynaya geed cufan. The afkoda dhirta ee bilowga xilliga daaqsinka toosan, ka dibna waxay dhacaan. Caleemaha waxay gaari karaan ilaa 21 cm Cagaarka Tradescantia sida caadiga ah ubaxyo buluug ama midab buluug ah, kuwaas oo si deg-deg ah u lumay.
In this article waxaan ka hadli doonaa salvia iyo noocyo, baro sida loo dhufto iyo daryeelka ee warshadda. Waxaan baraneynaa sida looga takhaluso cayayaanka salvia iyo sifooyinka daawooyinka geedka this. Ma taqaanaa? Salvia (Salvia) oo ka timid Latin ayaa loo tarjumay "horumarinta caafimaadka." Magaca kale ee lagu magacaabo salvia waa salvia.
Qoyska waayeelku waxay leeyihiin afartan nooc. Dhulkeena, waayeelka madow waxaa badanaa la beeray. Waxaa loo tixgeliyaa noocyada kala duwan ee lagu qurxiyo, marka laga reebo waayeelka iyo midabka loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka. Beer habboon ee waayeelka Tan iyo wakhtiyadii hore, waayeelka aan laga fogeynin dareenka, waxaa lagu beeray meel u dhow guriga, waxaa la rumaysan yahay in waayeelku sameeyo jinniyo shar ah.
Talooyin waxtar leh oo ku saabsan koritaanka dhirta gudaha
Mid ka mid ah dhirta caanka ah ee ugu caansan, kaas oo muddo dheer lagu dhisay daaqadaha guryaha iyo guryaha, waa balsam (xaaladdan, noocyo kala duwan). Daryeelidda ubaxkan ma aha mid adag, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad ogaatid sida loo soo celiyo, dacaayadda, biyaha u balaashho qolka guriga.
Sida loola macaamilo jiirarka xilliga xagaaga
Beeraley kasta oo doonaya inuu cawska ku ilaaliyo xaalad wanaagsan, iyo goosashada beerta waa ammaan iyo cod. Hase yeeshee, haddii ayadu si dhakhso ah kuugu soo degaan, markaa waxay samayn doonaan meelo badan oo hareereysan oo dhaqdhaqaaqa oo dhanna way wada baabi'i doonaan dhamaan foosaha shaqadaada. Tixgeli waxa aad samayn lahayd haddii bargu ku dhufanayo beertaada, iyo sida loola macaamilo. Tusaalooyinka nolosha nolosha ee dacha.
Sida loo koro wareegyada quruxda badan ee daaqadahaaga
Cagaarshow cagaaran ah oo ubaxyo ah oo ubaxyadu ay u eg yihiin adhiga aroosyada quruxda badan ee quruxda leh waa baaskiil. Magaca kale ee cyclamen waa alpine violet. Wuxuu ka yimaadaa Mediterranean, sidoo kale wuxuu ku badan yahay waqooyi-bari Africa, Spain. Cyclamen waxay leedahay ubax asalka ah iyo midab aad u ballaaran. Waxaa jira baraf cad, dhar guduudan, dhammaan noocyada kala duwan ee midabyada casaan, casaan iyo burgundi.
Irises waa geedo aad u qurux badan, wadar ahaan aan qabyo ahayn, iyo walwal badan oo iyaga ka mid ah. Hase yeeshee, wax badan oo la nadiifiyo, jilicsanaanta noocyada kala duwan, ayaa ka sii daraya xaaladaha xabsiyada, waxaana suurtagal ah in ay saameyn ku yeelan karto cayayaanka iyo cudurrada.Waxaan ku qasban nahay inaan raacno shuruucda aasaasiga ah ee teknoolajiyada beeraha.
Cayayaanka iyo cudurrada ycca: ka hortagga, calaamadaha iyo daaweynta
Yucca waa warshad kuleyl ah oo ku koraysa xaalad dabiici ah oo leh abaaro xoog leh waxayna u bedeli kartaa geedka weyn. Waa sahlan tahay in lagu koro warshadkan guriga, laakiin qulqulka ayaa jira cuduro saameyn kara, waana muhiim in ninkii beerta oo idil inuu ogaado sida loola macaamilo. Yucca cudurada: ka hortagga iyo daaweynta Yucca warshaduhu maaha mid ku filan qiimaha nafaqada ee ciidda iyo sida caadiga ah ee waraabka, maadaama ay tahay xad-dhaafka qoyaanka ee badanaa keena muuqaalka cudurada dhirta.
Jidka dhexdiisa, beerta ama deyrta waxaad mararka qaarkood arki kartaa duurka hooseeya leh miro cad oo qaabka kubbadaha. Warshad aan caadi ahayn waxaa lagu magacaabaa barafka (Symphoricarpus, Snowfield). Waxay noqon kartaa qayb qurxoon oo qurux badan ee muuqaalka, iyo daryeelka ee uma baahna wax badan oo adag. Xulashada goob loogu talagalay beeritaanka barafka Si shuruudaha iyo meesha ay ka soo baxaan barafka ma laha shuruudo gaar ah.
Sida loo daryeelo fuchsia qolka
Fuchsia waa warshad dilka ah oo sii kordhaysa dabiiciga ah ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika iyo New Zealand. Fuchsia indoor waa warshad hybrid ah, oo leh noocyo iyo qaabab badan. Waxaa lagu beeray dhaqanka in ka badan 200 oo sano, iyo beeralayda ubaxa waxay ugu yeeraan "farta Japan" ama "ballerina". Under xaaladaha dabiiciga ah, fuchsia wuxuu leeyahay muuqaalka kayn ah leh laamood jilicsan.
Qaar badan oo dhirta qalaad ayaa maanta caan u ah beeralayda ubaxa. Orchids waa ka reeban yihiin. Markaad doorato dhirta aad jeceshahay, ugu horreyn waxay eegaan caleemaha, laamaha iyo peduncle, illowday in ay eegaan dhulka. Keenista guri dufan leh ubax, iibsadaha badanaa wuxuu keenaa cayayaanka orchid ee hore u jiray carrada.